Qodobbada Salaadda ee Waxyaabaha Wanaagsan Oktoobar 2021 | QODOBADA SALAADA
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda Qodobbada Salaadda ee Waxyaabaha Wanaagsan Oktoobar 2021
Ishacyaah 43:19 Bal eeg, waxaan samaynayaa wax cusub; Haddana wuu soo baxayaa, miyaydnaan garanayn? Waxaan cidlada dhexdeeda jid ka samayn doonaa, oo lamadegaanka dhexdiisana webiyo baan ka jeexi doonaa.
Maanta waxaan la macaamili doonnaa qodobbada ducada ee wax wanaagsan Oktoobar 2021. Marka hore, ii oggolow inaan dhammaantiin idinku soo dhoweeyo bisha Oktoobar; Waxaan ku duceysanayaa in Ilaaha intaas kugu sii dhawray uu kugu dhawri doono dhammaadka sannadkan iyo wixii ka dambeeya magaca Ciise.
Waxaan la kulannay maalmo iyo bilo aad u badan sano 2021, laakiin midkeenna ma arag mana soo arag Oktoobar 2021 ka hor. Tani waxay noqon doontaa markii ugu horreysay ee aan aragno tan gaarka ah, oo bishaan ka dib, ammaanta Ilaah, waxay noqon doontaa markii ugu dambeysay. Bil kasta, usbuuc, maalin, saacad, iyo labaad sanadkiiba, Ilaah wuxuu dadka u salaaxaa barakooyin kala duwan. Looma baahna in la yiraahdo bil kasta oo cusub waa riyo u rumowday dad badan, bishaan Oktoobarna maahan mid ka reeban.
Ilaah wuxuu leeyahay ujeedo bishaan. Wuxuu leeyahay barakooyin la heli karo si dadka loogu diyaariyo. Waxaan u duceyn doonnaa inaan ku dhaqaajino barakooyin badan oo Rabbi nolosheenna ah bisha Oktoobar sannadka 2021. Waxsii sheegidda bisha Oktoobar 2021 waxaa laga helaa buugga ISHACYAAH 43:19 Bal eega, wax cusub baan samaynayaa. Hadda way soo baxaysaa, miyaydaan garanayn? Waxaan ka dhigi doonaa waddo cidlada dhexdeeda iyo lamadegaanka dhexdiisa webiyaal. Ilaah wuxuu ballanqaaday inuu samayn doono wax cusub, oo aanad hore u arag. Wax cusub oo kaa yaabin doona oo sababi doona in cadaawayaashaadu ay wejigooda daboolaan iyagoo ceebaysan markay arkaan muujinta salaaddaadii la jawaabay.
Waxaan ku hadlayaa erayga Ilaah; wax kasta oo wanaagsan oo aad had iyo jeer doonayso ayaa laguu sii dayn doonaa bishaan magaca Ciise. Waxaan ka soo horjeedaa dib -u -dhac kasta oo noloshaada ku yimaada; sidaad u gashay bishaan cusub, Ilaah wuxuu noloshaada ku bilaabi doonaa wax cusub magaca Ciise. Waxaa jira akhristayaal badan oo balooggan oo in muddo ah Ilaah ka baryayey arrin gaar ah; Sayidku wuxuu dhegaysan doonaa dhegtaada, waxaad la yaabi doontaa bishaan magaca Ciise.
Intiina badan oo akhrinaysa balooggan daqiiqaddan, kani waa bil xusuus mudan. Tani waa Oktoobar oo aadan ku illoobi doonin degdeg; Sayidku wuxuu kugu yaabin doonaa waxyaalo badan oo wanaagsan. Haddii aad wax gaar ah Ilaah u baryi jirtay, wakhtigaaga salaadda laga jawaabay waa kan. Aan wada tukanno.
Aabe Rabbi, waxaan kuugu mahadnaqayaa nimcadaada iyo barakooyinka noloshayda. Waan kaaga mahadcelinayaa ilaalintaada. Waxaan kuugu mahadnaqayaa jacaylkaaga daa'imka ah. Waan kugu weyneynayaa naxariistaada. Naxariistaadu meel fog bay ii dhigtay. Waan ku weyneynayaa. Magacaagu ha ku sarreeyo magaca Ciise.
Aabbaha Rabbi, sidaan u galay bisha Oktoobar sannadka 2021. Waxaan ku furaa duco kasta oo ku xidhan quwadda ruuxa quduuska ah. Maanta laga bilaabo, waxaan ku amrayaa in warka wanaagsani uusan ka dhammaanayn gurigayga Waxaan ku dhawaaqayaa awoodda magaca Ciise, bishaan oo dhan iyo wixii ka dambeeya, waxaa laygu hambalyeyn doonaa magaca Ciise.
Aabbow Rabbi, hadalkaaga wuxuu leeyahay, wax cusub baan samaynayaa, hadda way soo bixi doontaa, waayo ma ogid, waxaan ka dhigi doonaa waddo cidlada iyo webi cidlada dhexdeeda. Aabbe Sayidow, waxaan amar ku bixinayaa in wax kasta oo calaamad u noqday wax aan suuragal ahayn noloshayda ay ku suurogashay awoodda ruuxa quduuska ah.
Sayidow, waxaan ku burburiyaa xoog kasta oo aan macquul ahayn noloshayda xoogga magaca Ciise. Laga bilaabo maanta, waxaan bilaabi doonaa inaan la kulmo cabbir kale oo weyn oo magaca Ciise.
Sayidow, waxaan amar ku bixinayaa in laga bilaabo maanta dhammaan baryadayda aan la iiga jawaabin magaca Ciise.
Sayidow, waxaan ku hadlayaa uurkayga oo sanado xirnaa, ku fur magaca Ciise. Waxaan ku amrayaa xorriyad uurkayga magaca Ciise. Meel kasta oo uurkaygu ku xidhan yahay, waxaan maanta kaga hadlayaa Xorriyadda awoodda Ciise.
Sayidow, laga bilaabo bishaan, meel walba oo layga diido ayaa laygu xusi doonaa. Sayidow, nin kasta iyo naag kasta oo habaar igu habaaray, waxay ahaan doonaan sidaha warkayga bishaan magaca Ciise.
Aabe Sayidow, waxaan kaa baryayaa inaad kiciso duco sababi doonta in boqorrada dunidu igu raadsadaan magaca Ciise. Qorniinku wuxuu leeyahay, Quruumaha ayaa nuurkaaga u iman doona, oo boqorraduna waxay u iman doonaan dhalaalka sarakiciddaada. Sayidow, waxaan ku baryayaa in waxyaalaha wanaagsani ay bilaabaan inay noloshayda ku dhacaan hadda laga bilaabo magaca Ciise.
Sayidow, waxaan hortayda ka furayaa albaab kasta oo horumar iyo kor u qaadis ah magaca Ciise. Aabe, albaab kasta oo aniga iga xidhnaa, waxaan ku qasbay inaan ku furo magaca Ciise. Fure kasta oo cadowgu xado, waxaan ka baryayaa dib -u -soo -celin dhammaystiran magaca Ciise.
Rabbiyow, shaqadayda waxaan ku dhiibaa gacantaada. Sayidow adigoo sii wata waxsii sheegista la shaqaynaya bishaan, waxaan kaa baryayaa inaad iga yaabiso shaqadayda magaca Ciise. Waxaad tidhi waxaad ka samayn doontaa waddada cidlada iyo biyaha lamadegaanka dhexdiisa. Waxaan ku duceysanayaa in dallacsiinta aanan waligey filanayn ama guusha u muuqata mid aan suuragal ahayn lagu sii daayo magaca Ciise.
Sayidow, albaab kasta oo horumar ah oo dembigu xidhay, waxaan ka baryayaa in naxariistaadu iigu furto bishaan magaca Ciise. Sayidow, xariirka barakada iyo horumarka ayaa noloshayda laga furay bishaan magaca Ciise.
article PreviousQodobbada Salaadda Awoodda leh ee Ka Soo Horjeeda Saamaynta Sharka
Next articleDucooyinka axdiga ee fadliga leh
Maria Buarnè Oktoobar 6, 2021 9: 14 am
Italia grazie per le preghiere, pregate affinché Dio mi faccia giustizia e mi venga restituito ciò che mi è stato rubato dignità lavoro casa soldi, che i debiti vengano annullati, ne potente nome di Gesù. il favore dell'eterno la sua pace sia con te 🙏🏻🙏🏻
50 Dhibcood oo Salaada ah oo xoog leh oo looga soo horjeedo sixirka guriga
Akhrinta Kitaabka Qudduuska ah ee Maalinlaha ah 1-da Nofeembar 2018
Dhibcaha Salaadda Midhaha Ruuxda